June 05, 2016 – Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu maanta safar gaaban ugu amba-baxo Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ujeedka Safarka Madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ku qotoma arimo ku aadan sidii Dowladda Kenya uu kala hadli lahaa Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Kenya waxa ay go’aan cad ku qaadatay inay albaabada u laabayso Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya oo muddo 25-sano ah ay deegaansanayeen Dad Soomaaliyed oo colaada dalkooda ka taagan ka cararay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in Magaalada Nairobi uu kula kulmo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, uuna kala hadlo arimaha ku aadan qaxootiga iyo sidii Kenya ay wax uga bedeli laheyd go’aanka ay ku soo celinayso qaxootiga Soomaalida ah.
Dowladda Soomaaliya iyo tan Kenya iyo Hay’adda arimaha Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa horay heshiis saddex geesood ah ugu kala saxiixday Magaalada Nairobi, heshiiskaasi oo dhigaayay in si nabad ah oo ogolaansho ah lagu soo celiyo Qaxootiga Soomaalida ah.
June 5, 2016 tuugahaladilo2015